Usebenzisa kanjani i-waze endaweni yeemephu zikagoogle nge auto auto
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uyisebenzisa kanjani iWaze endaweni yeGoogle Maps eneAuto Auto
Nangona ii -apps ezikhethekileyo ze-Android zininzi zimbalwa kunee-iOS ezizodwa, ezoapps zikhona. Enye yezi iphuculwe nguGoogle uqobo kwaye ngenene akanayo enye indlela ye-iOS- iAuto Android. Inkqubo ezimeleyo yedashboard ezimeleyo ijolise ekujonganeni nesona siphazamiso sinokuthi sijongane naso kwizithuthi zethu-ii-smartphones. Into eyenziwa yi-Android Auto, ukuba awuyazi, ikwindawo enendlela elula eyenziwe lula ekuvumela ukuba uzulazule, udlale umculo / iipodcast, okanye wenze umnxeba ngeempompo ezimbalwa kunye nonxibelelwano kangangoko. Elona candelo lililo malunga ne-app ezimeleyo yileayifuni kwaye ayifuni ukuba ube neyunithi ehambelana nemoto ye-infotainment-Yibaleke kwifowuni yakho, qhagamshela inkqubo yakho yeaudiyo ngeBluetooth okanye iaudio jack, kwaye wena kunye neapos zilunge kakhulu ukuya.
I & apos sele siqokelele ezinye zezona zixhobo ze-Android ezihambelana ne-Android Auto, kodwa inyani iyaxelwa, ngaphezulu kwe-80% yabo bonke abadlali bomculo, ii-podcast streamers, okanye ii -apps ezinikezelweyo.
Ungafumana naziphi na iimephu okanye ii-app zokukhangela ezisebenza ngaphakathi kweAustralia Auto okoko iGoogle Maps ... okanye ayinako? Kuyamangalisa ngenene kwaye akunakho ukusebenzisa iGoogle & apos; enye into yokukhangela - iWaze- ene-Android Auto inikwe ukuba iiapos zenzelwe ngokukodwa ukulwa ukuxinana kweemoto kunye nokuphepha izithintelo ezindleleni ezinjengeendlela zendlela, ukuminyana kwezithuthi, kunye. .. amapolisa.
Nangona unazo zombini iimephu zikaGoogle kunye neWaze zombini ezifakwe kwisixhobo sakho se-Android, ufumanisa ukuba akunakwenzeka ukukhetha i-app yokuhamba ngokungagqibekanga kwaye unyanzelekile ukuba unamathele kwiimephu zikaGoogle.
Kukho & apos; eneneni indlela yabalandeli bexesha elide be-Waze yokusebenzisa usetyenziso nge-Android Auto. Kuya kufuneka ubhalisele i-beta okanye ulayishe nje ngokungalunganga uguqulelo lwe-beta lweWaze. Ngokweemvavanyo zethu, iinguqulelo ezahluka ukusukav.4.36.0.x-beta(Ngo-Matshi 2018 ukukhutshwa) ukuyav.4.40.0.x-beta(Ukukhutshwa kwangoku) wonke umsebenzi usebenze ngokungagungqiyo nge Android Auto. Nje ukuba ufake uhlobo oluhambelanayo lweWaze kunye nomlilo kwi-Android Auto, ngokuthepha kabini iqhosha lokuhambisa kwi-bar kuya kukuvumela ukhethe phakathi kweGoogle Maps kunye neWaze.
Unokuzikhuphelela ngesandla iinguqulelo ezindala ze-beta zeWaze kwi-APKMirror, umthombo othembekileyo. Jonga apha .
Waze isebenza ngaphakathi kweAuto Auto
Uhlobo lohlobo:Inkqubo yokuhlaziya ngokuzenzekelayo yeapps ngokuqinisekileyo iya kubhala ngaphezulu inguqulelo yakho endala yeWaze ngenye entsha, kwaye awufuni njalo kuba izakuphula ukuhambelana. Ke, kuyacetyiswa ukuba ukhubaze uhlaziyo oluzenzekelayo lweWaze.
Ukwenza njalo, vula usetyenziso kunye nephepha levenkile kwiVenkile yokudlala, cofa imenyu yamachaphaza amathathu kwikona ephezulu ngasekunene kwaye ukhubaze ibhokisi ethi 'Yenza uhlaziyo oluzenzekelayo'. Oko kuyakwenza.
Ukuba sizamile ukubulala iinguqulelo ezahlukileyo zeAustralia Auto kwezi veki zimbalwa, asizibonanga nakuphi na ukungangqinelani kunye neWaze, ngokuqinisekileyo okuthetha ukuba ayikhathali nokuba yeyiphi na iapp yeapp yeAustralia oyisebenzisayo- ukuba unayo Waze v.4.36-v.40, wena & apos; ulungile ukuhamba.
I-LG G3 ekugqibeleni ifumana uhlaziyo lwayo lwe-Android 6.0 Marshmallow kwi-AT & T (QAPHELA: T-Mobile nayo)
I-iPhone kunye ne-iPad 101: ungazicima njani izandi zokucofa ikhibhodi?
Ubomi bebhetri ye-Galaxy S21 Ultra 5G: yeyona inde ihlala ixesha elide kwi-Samsung?
Ngaba uyazi ukuba yintoni 'S' kwi Samsung & apos; s umgca weGPS S umi? Impendulo ihlaziyeke kakhulu
Iapile kunye neapos s sicwangciso sokutshintsha isipaji sakho, amaxwebhu kunye nezitshixo ngeApple Watch